Ubuhle besifazane Makeup Amehlo
Imicibisholo ibheka ukubukeka, ukuziphatha, ukuziphatha ngokocansi nokuziveza. Ziyahamba zonke, ngenxa yokuthi zibukeka zivulekile futhi zivuselela ubuso. Kodwa kulokhu kubaluleke kakhulu ukugcwalisa isandla sakho bese ukhetha uhlobo olufanele lwe-podvodki. Amantombazane amaningi asanda ukufunda ukwenza izimonyo azibuze umbuzo wokudweba imicibisholo ejwabu leso. Kodwa ngaphandle kwalombuzo, usadingeka uqaphele ukuthi yiziphi izinhlobo zama-eyeliner ezikhona nokuthi yini okudingeka isetshenziswe.
Sizokutshela ngezinhlobo eziyinhloko zokupayipi - ipensela ye-contour ne-eyeliner eyisiliva. Ziyabhekwa futhi ziyizona eziyinhloko, ngoba zivele phambi kwabanye futhi zithandwa kakhulu emantombazaneni kuze kube namuhla. Noma kunjalo, kunjalo, kukhona i-gel, i-podvodki efana no-ukhilimu, ipeni le-podkonka-uzizwa-tip, u-ezeliner kanye ne-eyeliner eyinkimbinkimbi. Abakhiqizi abaningi bafuna ukusimangaza ngento ethile futhi bavele ngezinto ezintsha. Kodwa sekuyisikhathi eside bathandwa? Lokhu kuyindaba ehluke ngokuphelele. Namuhla sizokhuluma kancane mayelana nomunye, ngomdwebo ofanele wemicibisholo kumajwabu amehlo, okugcizelela ngempumelelo umbono wakho.
Ake sibheke uhlobo lokuqala lwepensela. Kunezinhlobo ezahlukene zamapensela ezithombeni. Bafika kuyo yonke imibala yobugovu kanye nemithunzi yabo, bayi-matte futhi bayigugu, bangaba nobunzima obuhlukile. Ubulukhuni obuhlukile buyadingeka ukuze ukwazi ukudweba ngokufanele njengomcibisholo obonakala ungabonakali, futhi ngaphezulu kugcwele futhi kukhanye. Ipensela elithambile ifanele ukudweba ijwabu leso elingaphakathi, lithinte isikhumba kahle, kodwa ngepensela enzima kudingeka uyisebenzise ngokucophelela, ngoba ingalimaza isikhumba sethemba lamajwabu amehlo. Uma ufuna ukudweba imicibisholo, uzodinga ipensela enhle kakhulu, ngoba izithambile zifakwe ngokushesha.
Uma kuqhathaniswa nepensela, i-eyeliner egazini inikeza umbala ogcwele ngokwengeziwe. Ngokuvamile, i-podvodki imelana kakhulu namapensela, ikakhulukazi lokhu kungabizwa ngokuthi i-ezeliner eyeliner yamanzi. I-multicolored liquid podvodki ingahlanganisa imibala ehlukene, isibonelo, ingaba nge-eyeliner eluhlaza okwesibhakabhaka nge-green sheen noma i-eyeliner ensundu ngokukhanya kombala wegolide. Ekusetshenzisweni kwe-podvodki ye-liquids awudingi amathuluzi angeziwe, ngoba akhishwa ebhodleleni enebhashishi elihle elakhelwe ngaphakathi. I-shayela ingaba ngesibhashini esincane, ubude obungaba u-centimeter esisodwa, futhi singafana nesimo sephoyinti elizwelayo. Umfakisicelo ngendlela yephoyinti elizizwayo elizozizwa liyoba lula kakhulu kulawo mantombazane asanda kuqala ukufunda i-liquid liner, ngoba ngenxa yalowo mfakisicelo ukuthi kuzoba lula kuwe ukudweba umcibisholo obushelelekile kwijwabu leso bese ulungisa ubukhulu bomugqa.
Isici esibalulekile kule ndaba elukhuni ukukhetha umbala we-eyeliner. Umbala we-classical, of course, uthathwa njengomnyama. Umbala ongcono we-eyeliner unombala omnyama futhi unobundu. Ukuze uthole umbala opholile - umbala omnyama okwesibhakabhaka.
Kunezinketho eziningi ekusebenziseni i-liner eluhlaza kanye nemithunzi yayo. Ukwenza umkhosi wokugubha kungagcizelelwa ngosizo lwemibala yegolide neyesiliva, kanye nomama we-pearl omhlophe. Kodwa lapha kuzomele ukhumbule ukuthi ngamapayipi amhlophe okudingeka uqaphele, ngoba angeke afane nentombazane ethile ngezizathu ezithile. Ungakwazi ukuqaphela ukuthi ipensela emhlophe ingasetshenziswa kwijwabu leso elingaphakathi ukuze libukeke likhulise futhi livule iso.
Kukhona imfihlo encane eyengeziwe: ukwandisa amehlo ngokuzenzekelayo, ungakwazi uma udweba imicibisholo ekhanda eliphezulu ngaphezulu kombala othile, bese udweba ijwabu leso elingaphansi nge ipensela ukukhanya kwamathoni ambalwa.
Kubonakala kunomxhwele kakhulu uma usebenzisa umbala wombala wemvelo phezu kwejwabu leso, bese usebenzisa i-eyeliner efana nezwi lezingubo noma izesekeli ngombala, bese uthola umuzwa wobungani besithombe.
Amantombazane anamehlo ajulile kufanele akhethe ama-shadow shades, afana ne-blue, eluhlaza kanye ne-lilac. Futhi umbala omnyama nomnsundu we-eyeliner uzosuswa unomphela kulolu hlu, ngoba kugcizelela kuphela ukwehluleka kwamehlo anjalo.
Ngakho-ke, ake sibone indlela yokudweba imicibisholo ngendlela efanele. Kufanele uqaphele ukuthi kunezindlela eziningana zokusebenzisa izithungisi:
1. Siqala emaceleni angaphakathi. Sithatha umjikelezo ohlangothini lwangaphakathi lwekhulu leminyaka. Dweba ngokucophelela umugqa ongaphandle kwamehlo eduze komugqa we-cilia.
2. Siqala kusukela phakathi kwamehlo.
3. Ngokuqala sihlela amaphuzu amaningana eduze komjikelezo wejwabu leso eliphezulu, ekugcineni sixhuma emgqeni owodwa.
Kubalulekile ukuzama ukuhola umcibisholo oseduze nomugqa wokukhula kwe-eyelashes. Ngenxa yalokhu, umugqa wakho ngeke ubonise ama-breaks futhi uzothola umbukiso we-eyelashes obukhulu. Futhi ususe umcibisholo ongenawo umqondo phakathi komcibisholo nomkhawulo weso.
Kungakhathaliseki ukuthi ubude bomcibisholo bekungenjalo, ithiphu layo kufanele likhonjiswe phezulu. Esimweni esihlukile, ngeke uvule amehlo, kodwa amehlo abuhlungu. Dweba imicibisholo ngendlela efanele, ngakho-ke ihlale iphelelwe phansi kwekhulu leminyaka.
Uma udweba wonke uhlaka, kufanele ubambe izikhathi eziningi ngaphezulu komugqa womcibisholo kusuka ngaphandle kwamehlo. Futhi ngaphakathi, vumela uhlangothi luhlale luncane.
Uma unamaphutha ambalwa, ungakhathazeki, vele uwalungise nge-swab yekotini, owayekade uyikhipha emanzini ukuze ususe izimonyo. Kungenzeka futhi ukuthi umugqa owenziwe kuwo ube mkhulu kakhulu kunesidingo. Kulesi simo, udinga ukubeka phezu kwamathunzi akhe omnyama nomthunzi ukuya ekona langaphandle liso.
Ekupheleni kwemidwebo yemicibisholo uzodinga ukudweba kahle i-eyelashes yakho ngeyinki. Phela, imicibisholo ekhanyayo kufanele ifakwe ngokuvumelana ngokuhambisana nama-eyelashes afanayo.
Imicibisholo ijwabu leso kufanele isetshenziswe ngemuva kokuba izithunzi zamehlo zisetshenziswe, kodwa imicibisholo ngayinye ingasetshenziswa ngokuphelele ngaphandle kwemithunzi. Ekudwebeni imicibisholo, kufanele futhi akhumbule ukuthi umgudu kufanele uhambe kancane kancane ekhoneni elingaphakathi lamehlo angaphandle.
Ekudwebeni imicibisholo, kukhona umyalo we-classic othi uma ungazi ukuthi imuphi umcibisholo omele udwebe, bese udweba umugqa ozophindaphinda umugqa, ozokwenzeka uma uguqula ngokwengqondo kusuka ephikweni lekhaleni ukuya ethempelini.
Ngakho-ke sithole ukuthi kuhle kangakanani ukusebenzisa imishini yokwenza amapayipi bese ucacisa izandla ezinhle kumajwabu amehlo. Khetha i-liner efanele kuwe, khetha umbala wayo, ukuma kwemicibisholo, ukuhlola futhi uzophumelela.
Beautiful makeup makeup
Ukubukeka kwesilwane: Ukufunda ukwenza ukwakheka "I-Cat's Eye"
Ama-Makeup wokukhulisa iso
Amapensela wokwenza amehlo nezindebe
Amafritters aluhlaza futhi alula ku-yogurt
Indlela yokukhohlisa umyeni wakhe ukuba abe nengane yesibili
Faka umbala kumklamo wangaphakathi
Sizojabulisa uNdunankulu Frost: izinkondlo Zonyaka Omusha ezinhle futhi ezilula zezingane
Umbhali we-Soft Toys